Mivaha tsikelikely ny fihibohana ho an’Analamanga: mirava amin’ny 5 ora ny mpiasa, mbola miato kosa ny taxibe | NewsMada
Par Taratra sur 10/08/2020
Ankoatra ny fandaminana vaovao amin’ny fizarana ny ”Vatsy tsinjo” sy ny ”Tosika fameno”, nisongadina amin’ireo fepetra hiatrehana ny fahamehana ara-pahasalamana mandritra ny 15 andro manaraka ny fiverenan’y asa rehetra hatramin’ny 5 ora hariva. Mbola miato kosa anefa ny fitaterana amin’ny taxibe…
Nohalefahana. « Miverina amin’ny fiainana andavanandro ny eto Antananarivo Renivohitra, Avaradrano, Atsimondrano, distrtikan’i Moramanga. Miasa hatramin’ny 5 ora hariva ny sehatra tsy miankina sy ny mpiasam-panjakana rehetra », hoy ny hiloha Rajoelina Andry, omaly raha nitafa ho an’ny vahoaka malagasy. Nanteriny fa misokatra hatramin’ny 5 ora hariva koa ny tsenam-pokontany saingy diovina aorian’izany. Na izany aza anefa, tsy mbola miasa ny taxibe. Miasa tahaka ny teo aloha ny taxi anaty fanarahana fepetra.
Mbola miato ny zotra nasionaly
Tahaka izany koa ny taingin-droa amin’ny moto amin’ny fitondrana ny bokim-pianakaviana. Tafiditra amin’ny sokajy faharoa ary efa tratra ny « Pic » satria midina ny isan’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina ny anton’izany.
Mbola mikatona kosa ny zotra nasionaly miditra sy mivoaka an’Antananarivo. « Mbola hojerena sy miankina amin’ny fivoaran’ny valanaretina izany », hoy izy. Malalaka ny fivezivezen’ny fiara mitondra entana.
Tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina
Mbola voatazona ny tsy fahazoana mivezivezy manomboka amin’ny 9 ora alina hatramin’ny 4 ora maraina. Voarara ny fivoahana ny an’Analamanga ary mbola tsy azo atao koa ny mitondra razana mivoaka ity faritra ity.
Etsy andaniny, tsy mbola misokatra ny sekoly ary voatazona ny datim-panadinana rehetra. « Efa mandinika ny fomba hanatanterahana izany ny fanjakana miainga amin’ny fandaharam-pianarana », hoy ihany ny filoha.
Mivaha tanteraka ny fepetra ho an’i Toamasina
Ho an’ny any Toamasina I sy II kosa, miverina amin’ny fiainana andavanandro ny any an-toerana. « Miala tanteraka amin’ny fihibohana. Na izany aza, ilaina ny fanaraha-maso ny tranga rehetra », hoy ny filoha. Anton’izany efa nandalo ary tapitra ny « Pic » ary nidina ny isan’ireo tratran’ny valanaretina. Naverin’ny filoha nohazavaina koa ny momba ny vatsy tsinjo sy ny tosika fameno ary ireo tokony hisitraka izany.
Hampodiana ireo teratany tavela any ivelany
Namaly ny antson’ireo teratany Malagasy tavela any ivelany ny fanjakana ka hampodiana izy ireo. Na izany aza anefa, tsy maintsy mandalo fitiliana any am-piaingana izy ireo. Tahaka izany koa rehefa eto an-toerana ka ho avy ny 15 aogositra sy ny 22 aogositra izy ireo. Iaraha amin’ny Air Madagasikara izany ho an’ny ao Eoropa, hiainga any Paris. Miverina an-tanindrazana ny 19 aogositra kosa ireo any Inde. Omena alalana amin’ny fandehanany manohy fianarana kosa ireo mbola tavela eto ary tokony hiainga ny 21 aogositra izy ireo rehefa milamina ny taratasy.
Ho an’ireo mpiasa tapaka asa amin’ny tsy miankina ka nahaloa ny Cnaps, hampidram-bola azy ireo hatramin’ny dimy hetsy ariary ny fanjakana. Tsy hisy ny zanabola ary hanomboka hozaraina ny 24 aogostra izao izany.